Previous Article Ọkọchị: Obianọ Adụọla Ndị Ji Ọrụ Okpuru Ụzọ Ka Ha Chighaa n'Ọrụ
Next Article Lawrence Ọnụchukwu Eguzobe Òtù Ọrụ Obi Ebere n'Ụkpọr
Igbo sị na omere onye ogbenye na-emere chi ya, ma sịkwa na ọ hụrụ mma mee nwèrè ụgwọ ọrụ. Ka ọ dị taa, nwunye aka na-achị steeti Anambra, bụ Oriakụ Ebelechukwu Obianọ nọrọ na nso-nso a wee rụọrọ ma nyefèé otù nwaanyị ọzọ enweghị di na ebe obibi ọmarịcha ụlọ ọhụụ n'obodo Nnobi, dị n'okpuru ọchịchị Idemili South nke steeti ahụ.
Ya bụ nwaanyị di ya nwụrụ, bụ Oriakụ Regina Madụka, onye sitere Ụmụru-Ebenesi dị na Nnobi ka e kwùrù na di ya nwụrụ oge ha mụchara otu nwa nwoke ha mụrụ bụkwazị onye bụ naanị nwa ha nwèrè taa, ma bụrụkwazie onye e kwuru na ọ bụ naanị ya na ya bìri n'ótù ụlọ ọkpọkịrị aja dakpọsịrị àdàkpọsị ha nwèrè, wee ruo oge Oriakụ Obianọ gbàtààrà ha ọsọ enyemaka.
Ya bụ ụlọ wètàzịrị n'ọnụ ọgụgụ ụlọ iri abụọ na asatọ Oriakụ Obianọ rụgòòrò ndị ụwa na-atụ n'ọnụ, site n'okpurù atụmatụ ọrụ obi ebere ya, bụ 'Caring Family Enhancement Initiative, (CAFE)'. Iteghete n'ime ụlọ ndị a bụ nke a rụrụ site n'enyemaka òtù mba ụwa bụ 'United Nations Development Programme (UNDP)', ma ọkà n'ọnụ ọgụ n'ime ndị ritere ya bụ uru bụ ndị di ha nwụrụ na ndị enweghị ebe obibi.
N'okwu ya oge ọ na-enyefe ya ìgodo ụlọ ahụ, bụ nke nwere ọnụ ụlọ atọ, nwee mmiri a gbapùrù ọhụụ, ma nwekwa igwe na-enye ọkụ nà akụrụngwa ndị ọzọ na-adị n'ụlọ; Oriakụ Ebelechukwu Obianọ mere ka a mara na ọ na-enye ya obi ụtọ oge ọbụla ya hụrụ ka ihu ọchị na-awa nwa-ogbènyè, ma kwuo na ebumnobi o ji eme nke ahụ bụ iji tụnye ụtụ nke ya n'ịchụ ụbịam na ihe isiike ọsọ ụkwụ erughị ala na steeti ahụ.
N'okwu nke ya, Kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ ntà na steeti ahụ, bụ Ọkammụta Kate Omenụgha gbara aka ebe na Oriakụ Obianọ emetụla ọtụtụ ndụ na ezinụlọ aka na steeti ahụ site n'ọrụ obi ebere ya, ma kpọkùo ya ka o jide ka o ji n'inyerịtara ụmụ mmadụ aka.
Na'akụkụ nke ya, nwa amadi ahụ na-anọchite anya ọgbọ nta nkwàdo Idemili South n'ụlọ ọgbakọ omebe iwu steeti Anambra, bụ Maazị Chuka Ezenwwunne kelere Oriakụ Obianọ maka ezi ọrụ ya n'ihicha ndị ihe na-esiri ike na steeti ahụ anya mmiri, ma kwukwazie na nke ahụ o mere abụrụla otu ihe a gaghị echezọ echezọ n'obodo ahụ na na mpaghara ahụ niile ma bụrụkwwa nke ga-adị ọkpụtọrọkpụ n'aha ya.